Ukuthakazeliswa kwezilwanyana ezihlambulukileyo - kutheni sifuna ama-dinosaurs aphezulu kakhulu
Ukunyamekela kunye neendleko zezilwanyana ezinwabuzelayo njengesilwanyana
Kubonakala ngathi yinto epheleleyo kwaye inja yeklasi okanye ikati iyaphuma ngokupheleleyo. Ngoku kwimizi yaseJamani kunezikhukumbi ezininzi kunye nabantwana bethu ngoku bafuna i-turtle, i-gecko okanye i-tarantula.
Oko sithandana nje ukugubha iintloko zethu ngokwenene kuyindlela yokukhetha kunye nenye indlela yepilesi yeklasi. Ewe, emva koko, unesilwanyana esikhethekileyo kwihostele yakho. Kodwa ngaba i-reptile iyakulungelelene nendlu kunye nabantwana okanye nonke?
Ngaba izilwanyana eziziwayo zifanelekile njengezilwanyana ezifuywayo kubantwana?
Kuyamangalisa, kodwa iinqunta okanye iintlobo ezahlukeneyo zeelzards zisithakazelisa, mhlawumbi ngenxa yokuba zisikhumbuza ngamaxesha amade alilibale.
Ukongezelela, bahluke ngokupheleleyo kwiimeko zabo, baziphathe ngokuphambene nezilwanyana eziziwayo kwaye banomdla ngokubonakalayo.
Ewe, izilwanyana ezinwabuzelayo zizilwanyana ezimangalisayo. Kodwa kufanelekile njengepilesi? Kwabantwana?
Ngaba kufuneka sithenge i-reptile?
Ngaphambi kokuba ucinge ngokuthenga i-reptile, njenge-chameleon okanye i-gecko, kufuneka uqaphele ezinye izinto.
Okokuqala, i-reptile ayifanelekanga kwimvelo kwaye iyayithandeka ngokweqile. Ukuba awukwazi ukunandipha ukubukeka kwezilwanyana ezihlambulukileyo ngokusisigxina, awuyi kuvuya nabo ekugqibeleni. Iindwendwe zihamba kuphela xa kukho into yokutya. Ngenyanga yokuzila ukutya okuhle kakhulu kungekhona.
Ezinye iintlobo ze-lizard azidluli enye imitha ngosuku kwaye ukuba kunjalo, ngoko kuphela xa singayiboni. Abantwana, ngokukodwa, bebefanele batyiswe ngokukhawuleza nge-gecko ekhuphayo.
Ngentlanzi, awukwazi ukukhwela, ukuhamba okanye ukuhamba nayo. Kwakhona, izilwanyana ezihlaziyiweyo aziyi kukhawulwa ngabantu. Awudingi ixesha kunye namandla ukuze ufundise lobu buqhetseba, asiyi kuphinda ufunde.
Umgca wekhasi lombala - Udidi lwephepha lokuhamba
Kwakhona, i-reptile ayinaso isidingo sokusondelana okanye ungathanda ukufunwa nguwe. Ayifuni ingqalelo yakho. Ngokuphambene noko, yikhuphe ngaphandle kwe-terrarium, iya kugxininiswa kwaye ayize ifunde ukuba awukwenzi nantoni na kuyo.
Iindwendwe zibiza, kwaye kungekhona nje kwisigaba sokufumana. Iindleko zamanzi zamanje kwanoma ziphi na izibane zokufudumala kufuneka zibalwe. Ukongezelela, ama-terrarium entle ahlawula i-euro eziliqela, izixhobo kunye nesondlo sinokubetha ngenyanga kunye ne-50 Euro.
Ukuba awunamdla ngokwenene ezihlambulukileyo kwaye ngezinye iinkcukacha uzifumanisa unomdla, awufanele uthenge i-reptile. Ukongezelela, izilwanyana ezihlambulukileyo zazo zonke iintlobo azikho ezandleni zabantwana. Nangona i-tortle ayiyi kukhononda xa uHugo encinane ehamba naye egumbini lokuhlala ensimini, akayi kuthanda nayo.